नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ स्थित वडा कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा सो वडामा रहेको इँटा उद्योगमा धेरै बालबालिकालाई मजदुरको रुपमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।
नेपालगन्ज वडा नं. १३ स्थित अमन इँटा भट्टामा करिव २० जना बालबालिकालाई श्रममा लगाइएको पाइएको वडा अध्यक्ष विरेन्द्रबहादुर शाहले बताए ।
अनुगमन टोली इँटा भट्टामा पुग्दा १२ बर्षका सुग्गी लोनियाले घोडा–बुग्गीमा इँटा बोकिरहेको र अन्य धेरै बालबालिकाले इँटा बनाउने काममा लागेको अवस्थामा फेला पारिएको उनले बताए ।
यस्तै १० बर्षिय इमाजउद्दिन खाँले पनि दाईसँगै इँटा बनाइरहेको अवस्थामा भेटाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । दाई र १० बर्षिय बहिनीले इँटा उद्योगमा काम गर्ने गरेकोले आफु पनि संगै आएर काम गरिरहेको बालक खाँले बताएको वडा अध्यक्ष शाहले जनाए ।
अधिकांश बालबालिकाहरू आफ्ना अभिभावकसंगै कामका लागि आउने गरेको मजदुरलाई काममा लगाउने ठेकेदार रहमत अलिले बताए । बुग्गी चलाउने र बुग्गीमा हाल्ने उठाउने बालकहरूलाई मासिक रुपमा फरक फरक ज्याला उपलव्ध गराउने गरेको उनले बताए ।
अभिभावकहरूसंगै आएका बालबालिकालाई पनि इँटा उद्योगले श्रममा लगाउने गरेको खवर पाएपछि बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरूले उपमहानगरमा अनुगमन थालेका छन् ।
इँटा उद्योगमा बालमजदुरको बढि प्रयोग भैरहेको कारण यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आफुले यसलाई रोकथामको पहल गर्ने वडा अध्यक्ष शाहले बताए । बालबालिका प्रयोग भएको उद्योगको विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अगाडी बढ्ने उनले जनाए ।
उदयपुरस्थित रहेको इँटा भट्टामा काम गर्दै आएका बालबालिकाहरूले बधुवा मजदुरहरू जस्तै काम गर्ने गरेको पाईएको वडा अध्यक्ष शाहले बताएका छन् । मजदुरका परिवारसँग आएका बालबालिकालाई पनि उद्योग सञ्चालकले श्रमशोषण गर्दै आएको वडा अध्यक्ष शाहको भनाइ छ ।
विद्यालय पढ्ने उमेरका ८ देखि १५ वर्षसम्मका धेरै बालबालिका अहिले हिलो माटोमा काम गर्न बाध्य भएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।
उपमहानगर लगायत बाँकेका प्राय अन्य इँटा उद्योगमा पनि बालबालिकालाई श्रममा लगाउने गरिएको छ ।
नेपालगन्जलाई बालश्रम मुक्त उपमहानगर बनाउन सबै बालश्रमिकको उद्धार गरेर उनिहरूलाई श्रमबाट मुक्त पार्ने अभियान सञ्चालन गरिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका उप प्रमुख उमाथापा मगरले नेपालगन्जलाई बालमैत्री नगर बनाउनका लागि बालश्रममुक्त नगर बनाउनु अतिनै आवश्यक रहेकोले सोही बमोजिम अभियान अगाडी बढीरहेको बताए ।